Gbasara anyị - Guangxi G&M Enterprise Management Co., Ltd.
Shijiazhuang Shuangshi Tools Co., Ltd e hiwere na March 2017, nke nwere 30 afọ ahụmahụ na diamond hụrụ agụba ụlọ ọrụ. Kemgbe 1991, anyị nyochara ma banye na diamond hụrụ agụba ụlọ ọrụ na eze.
Anyị ụlọ ọrụ e wuru site Mr. Mou Liping na Yang Yongbo, ndị na-mgbe niile na-elekwasị anya na diamond ngwaọrụ. Anyị diamond hụrụ agụba na-esorowo site elu mma carbon bughi ígwè matriks, 65 igwe nchara, elu ọkwa diamond na onwe-mere alloy ntụ ntụ. A na-ekepụta teknụzụ ngwaahịa niile maka onwe anyị
Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ anyị nwere ihe dị ka ndị ọrụ 150, anyị na-agbalikwa ịnye ndị ahịa ngwaahịa mbụ na ọrụ zuru oke. Na-achịkwa ya nke na-achịkwa nke mmepụta usoro, anyị na-enwe a elu aha na njem.
Anyị nwere olileanya na anyị ga-enwe ihe mmekọ na-eme n'ọdịnihu na-eme ihe onyinye na diamond ngwaọrụ ụlọ ọrụ mmepe ọnụ.
Anyị malitere ichoputa diamond hụrụ agụba ụlọ ọrụ, na chie abanye diamond hụrụ agụba ụlọ ọrụ.
Anyị malitere itinye ihe diamond hụrụ pupụtara na mmepụta. N'oge ahụ, ụlọ hụrụ agụba ụlọ ọrụ bụ na mbụ ya ogbo, amị nnukwu nkọwa nke raw hụrụ UM UBARA (dị ka 1.6m na 1.8m size konkiri na mabul ọnwụ pupụtara) na ịcha pupụtara (dị ka 350mm na 400mm size konkiri ịcha pupụtara. ).
Anyị malitere ịbawanye mmepụta nke obere obere ahịhịa (dịka 105mm, 110mm nkume, seramiiki na-egbutu pupụtara).
Anyị malitere ịmụba mmepụta nke ihe, korota, cobble nkume n'okporo ámá hụrụ UM UBARA (350mm, 400mm, 500mm, 600mm nha).
Anyị gbakwunyere mgbidi ahụ (dịka 600mm, 800mm size).
Anyị mepụtara a mma mgbidi uzo na nkume a tụrụ atụ iberibe (dị ka 114mm, 125mm, 130mm, 156mm, 188mm size)
Anyị mepụtara elu siri ike ihe, ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ mmiri na wharf pụrụ iche hụrụ agụba (dị ka 300mm, 400mm, 500mm size)
Anyị malitere itinye ọgbọ nke abụọ nke ngwaahịa ngwaahịa diamond: iji tupu-alloyed ntụ ntụ na diamond iji mepụta agụba.
Maazị Mou Liping na injinia Yang Yongbo jikọrọ aka wee guzobe Shuangshi Tools Co., Ltd., na - etinye ihe ọrụ teknụzụ dị elu na talent, na - eduga ọhụụ ọhụụ nke teknụzụ imepụta na ụlọ ọrụ agụba ọkụ yana inye onyinye ogologo oge na mmepe nke ụlọ ọrụ.
Teknụzụ anyị eruola ọkwa ọhụrụ, nweta mba ọhụụ teknụzụ ọhụụ. E tinyela ngwaahịa na ahịa amerie otuto nke imirikiti ndị ọrụ.
Office na orylọ ọrụ
Companylọ ọrụ anyị ugbu a nwere ngụkọta nke ihe dị ka ndị ọrụ 150, kewara n'ime ngalaba iri.
1. Nzụta na Supply DNkeji
2. Ogo Inyocha DNkeji
3. Mmepụta Mnjikọ aka DNkeji
4. Ego DNkeji
5. Ngalaba Ngwaọrụ
6. Ezigbo ụlọ na Imba Sales Dnkewa
7. N'ulo na Doreign Migbe Dnkewa
8. Ngwaọrụ Mnkwa na Rnnabata DNkeji
9. priselọ ọrụ Pịdọ aka ná ntị na Mnjikọ aka DNkeji
10. Ngwaahịa R&D na Tihe omumu DNkeji
Ngalaba R&D na Ngalaba Teknụzụ bụ ngalaba anyị, yana ndị ọrụ 15. Ngalaba a na-achota na ụlọ ọrụ anyị nwere ike inye ndị ahịa ogo dị elu na ọkwa dị elu.
Na mgbakwunye, ngalaba ọrụ ụlọ na nke mba ofesi na-arụ ọrụ dị mkpa, yana ngụkọta nke ndị ọrụ 40. Ha enyela onyinye pụtara ìhè na mmepe ụlọ ọrụ site na ịkwalite ngwaahịa.
N'ezie, ngalaba ndị ọzọ dịkwa oke mkpa. Ha na-arụ ọrụ n'ọnọdụ ha, nke bụ ihe ndabere nke ọrụ ụlọ ọrụ ogologo oge.
Ngwaahịa na ọnụahịa kachasị mma